Saqiir Kale Oo Lagu Fara Xumeeyey Xamar | Somalia News
Wararka ayaa sheegaya in saacadihii tagay kufsi kale uu ka dhacay caasimadda Muqdisho, markan waa gabar saqiir ah oo 5 jir ah,
Samiira Yuusuf Maxamed ayaa la sheegayaa in lagu kufsaday Waaxda Faanoole, oo ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho iyada oo ninkii fara xumeeyeyna uu baxsaday.
12-kii bishan ayey aheyd markii la weriyey in wiil yar lagu kufsaday xaafadda Djibouti ee degmada Shingani, wiilkan waxaa uu jiray 10 sano.
11-kii isla bishan waxaa inta la kufsaday, dabaq laga tuuray gabar 19 jir aheyd, waa Xamadi Maxamed Faarax, in ka badan 5 qof ayaa loo hayaa kiiskeeda.
Arrimahan kufsiga ayaa kusoo batay magaalada Muqdisho xilli hindise sharciyeed la xiriira kufsiga uu yaalo golaha shacabka.
Previous articleNinkii sameeyay Gantaalada Guuxooda ka dheereeya oo abaal marin qaali ah la siiyay !!
Next articleWasiirka haweenka oo iska fogeysay inay baarlamanka u gudbisay sharcigii ka hor imaanayey diinta Islaamka